Ogaden News Agency (ONA) – Bangiga Aduunka oo Xukuumada Wayaanaha Eedeeyay.
Bangiga Aduunka oo Xukuumada Wayaanaha Eedeeyay.
Posted by Dulmane	/ September 28, 2017
Warbixin dheer oo uu soo saaray Bangiga aduunka ayaa lagu sheegay in qaybo kamid ah wadanka gumaysiga Itoobiya uusan kajirin wax hormar ama nolol ah oo ay shacabku haystaan.
Warbixinta kasoo baxday Baanka aduunka ayaa lagu sheegay in dadka kudhaqan wadanka Itoobiya ay 33% yihiin dad sabool ah oo aan haysanin dhamaan adeegyada aas’aasiga, sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay in dad badan oo ree Itoobiya ah ay maalinkii helaan wax aan kabadnayn 1 Doller.
Warbixinta ayaa meelaha ugu liita dhinaca nolosha kusheegtay wadanka Ogadenia iyo dhulka Canfarta, kuwaas oo sida warbixinta lagu xusay ah dhul aysan wax hormar iyo nolol toona ah kajirin. Sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay in Gobolka Binshangul uu yahay meelaha ugu siidan dhinaca nolosha shacabka.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in Goboladii roonaan jiray ee Itoobiya ay xaaladoodu siixumaanayso kuwaas oo sida lasheegay ay kamid yihiin Oromia iyo shucuubta koonfureed, waxaana Goboladaas kajira dhib siifidaya sida warbixinta lagu xusay.
Dhaqaale yahan udhashay wadanka Itoobiya ayaa taliska wayaanaha ku eedeeyay in ay dhaqaalaha wadanka kubixiyaan Gobol jeclaysi iyo nin jeclaysi, wuxuuna dhaqaale yahanku sheegay in hadaan dhaqaalaha lasimin uusan wadanku hormar gaadhaynin.
Kooxda TPLF ayaa lagu eedeeyaa in dhaqaalihii wadanka iyo dhamaan kaabeyaashii dhaqaalaha ay urartay Gobolka Tigree halkaas oo dadku ay kuhaystaan nolol aad uwanaagsan.